Euro 2012 – Nangoron’entana tsy fidiny ry Petr Cech - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Euro 2012 – Nangoron’entana tsy fidiny ry Petr Cech
Nanao ny tsy nambinina. Rehefa avy nanohitra hatrany ny daka totoafo nataon-dry Cristiano Ronaldo sy Nani ary Raul Meireles ingahy Petr Cech, izay mpiandry tsatokazon’ny Repoblikan’i Tchèques, dia folaka ihany izy ireo teo amin’ny minitra faha-78.
Ny lohan’ny CR7, tompon’ny baolina volamenan’ ny Fifa tamin’ny taona 2008, no nampikobana ny harato nandrasan’i Cech, teo amin’io fotoana io ka nahatonga ny fodian’ireto farany tsy hanohy intsony ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa na ny Euro 2012, atao any Pologne sy Ukraine.
Somary nampiseho hery ireo lalao nataon’ireo ekipan’ny Repoblikan’i Tchèques tao anatin’ny fizaram-potoana voalohany. Nihareraka sy tsy nahavita lalao firy intsony anefa izy ireo tamin’ny 45 minitra faharoa. Nisesisesy araka izany ny fanafihana ho an’i Portugal. Efa indroa saika nahatafiditra baolina i CR7 saingy nidona tamin’ny tsato-by hatrany izany.
Miandry fotsiny izay mandresy amin’i Espagne sy France, ampahefa-dalana atao rahampitso, izany i Portugal eo amin’ny lalao manasa-dalana voalohany.
Hitohy anio alina ny dingan’ny ampahefa-dalana ho an’io fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa io ka ny fihaonana eo amin’i Alemana sy Grika no harahintsika. Ho azy ireo dia manantombo eo amin’ny tanjaka ny Rainiboto saingy manam-bintana kokoa ny grika, izay efa notsotsofina vao tafita teo amin’io dingana io. Isan’ny nahatafakatra azy ireo ny fihaonana mivantana teo aminy sy Rosia nandritra ny andro farany ho an’ny dingan’ny fifanintsanana teo amin’ny vondrona A.
Ireo izay tafavoaka ho mpandresy anio kosa no hihaona amin’izay mibata ny fandresena eo amin’i Italia sy Angletera, izay hamarana ny dingan’ny ampahefa-dalana amin’ny 28 jona ho avy izao.
Allemagne # Grèce (9 ora sy 45 m)
Basket ball N1B – Nihintsana avokoa ireo ekipan’Analamanga Tsy nahovoka. Ekipan’Analamanga telo no indray nihintsana teo amin’ny dingan’ny ampahefa-dalana ho an’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, eo amin’ny basket sokajy N1B, tany Toliara, omaly hariva. 66 no ho 63 no nandavoan’ny SBC (Vakinankaratra) ny ekipan’ny kolejy Masindahy Misely, raha ny TTS avy eny Ambohimanarina no nanaraka ny diany taorian’izay, resin’ny USF Matsiatra Ambony 90 no ho 80 taorian’ny fanalavam-potoana. Teo amin’ny lalao fahatelo
Baolina kitra Analamanga – Hotsapain’ny IFC ny Tana Formation Mialoha ny handehanany hiatrika ny lalao famaranana mandroso any Seychelles, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’ny Ranomasimbe Indiana ny talata izao, dia hotsapain’ ny Iarivo Football Club etsy Mahamasina anio ny Tana Formation FC. Lalao miverina ho an’ny fiadiana ny ho tompon- dakan’Analamanga eo amin’ny baolina kitra ity lalaon’ny roa tonta ity, tafiditra amin’ireo lalao hanamarika ny andro faha-13. Lalao azo heverina ho fanalana vela ihany ho an’ny ekipan’i Frank Rajaonarisamba, satria tamin’ny lalao mandroso dia niondrika tamin’ny isa 2 no ho 1 ny Tana Formation. Mila mitana ny toerany faharoa eto Analamanga anefa ity farany satria taorian’ny andro faha-12 dia izy ireo no
Tenisy « Coupe Davis » – Hifandona amin’ ny 1/2-dalana i Maraoka sy Madagasikara Azon-dry Jean Jacques Rakotohasy sy ny namany, izay misolo tena antsika any Egypta amin’ny fifaninanana tenisy na ny “Coupe Davis” Vondrona III, ny laharana voalohany niarahana tamin’i Namibia ary Rwanda tao amin’ny Vondrona C. I Maraoka no hifandona amin’ny ekipa Malagasy amin’ny manasa-dalana, taorian’ ny nandresen’i Mada- gasikara isa 3 no ho 0 ny Namibiana, omaly. Teo amin’ny lalao voalohany, resin’i Jean Jacques Rakotohasy na i Zakakely tamin’ny seta 2 no ho 0 (6/3, 6/0)
Rugby « Grand defi Berthin » – Ekipa valo hifampihantsy eny Antanikatsaka Mandritra ny alatsinainin’ny Pantekosta dia hifampihantsy eny amin’ny kianjan’Antanikatsaka ireo ekipa valo avy eny amin’ny seksiona Atsimondrano, eo amin’ny taranja rugby, izay efa niatrika ny “tournoi Berthin Atsimondrano”. “Fangatahan’ireo ekipa ireo ny hifanala vela ka antony nahasarika anay hanohana azy ireo. Fanao rahateo izany lalao fihantsiana izany ho an’ny rugby. Tsy ady omby fa fitaovana hoentina manao fanatanjahantena no hatolotra ho an’izay mandresy”, hoy i Berthin Randriamihaingo, filohan’ny “Team Berthin”. R.A Fandaharam-potoana XV Trefle
Kitra amin’ny tora-pasika – Mpilalaon’ny morontsiraka avokoa no mandrafitra ny Barea Saika mpilalao avy any amin’ny morontsiraka avokoa no mandrafitra ireo Barea 12 hiatrika ny fifanintsanana hiatrehana ny Mondial eo amin’ny baolina kitra lalaovina amina tora-pasika hatao any El Jadida Maraoka amin’ny 21 – 26 mey ho avy izao. Hifantenana izay hisolo tena an’i Afrika amin’ny fiadiana ny amboara eran-tany hatao any Tahiti amin’ny septambra 2013 izy ity. Olona 15, ka 12 no mpilalao, no handrafitra ity delegasiona malagasy, izay hanainga amin’ny alatsinainy
Baolina kitra, Mpanoratra Rijakely, 22.06.2012, 09:10	FIARAHAMONINA